Otu esi akwadebe sputtering target
Ebumnuche na -atụgharị aka na -ezo aka na isi mmalite nke na -efesa ma na -etinye ya na mkpụrụ site na ndọta magnetron., plating-arc ion plating ma ọ bụ ụdị mkpuchi mkpuchi ndị ọzọ n'okpuru ọnọdụ usoro kwesịrị ekwesị iji mepụta fim dị gịrịgịrị dị mkpa., ngwá ọrụ, iko, ngwaọrụ eletrọnịkị, semiconductors, ndekọ magnetik, ewepụghị ngosi, mkpụrụ ndụ anyanwụ, wdg. Ihe ebumnobi a chọrọ na mpaghara dị iche iche dị iche iche.
Nkwadebe nke sputtering zaa
Nkwadebe nke sputtering lekwasịrị ihe nwere ike kere ụzọ abụọ: Nkedo a wụrụ awụ na ọla igwe dị ka usoro si dị. Na mgbakwunye na ịchịkwa ịdị ọcha, njupụta, nha ọka na nghazi kristal nke ihe ahụ, ọnọdụ ọgwụgwọ ọkụ na ụzọ nhazi sochirinụ kwesịkwara ka a chịkwaa ya nke ọma. njikwa.
1. Metallurgy ntụ ntụ
Mgbe ị na -akwadebe ebumnuche site na igwe onyonyo, igodo ahụ dị: (1) na-ahọpụta ịdị ọcha dị elu na ntụ ntụ dị oke mma dị ka akụrụngwa; (2) ịhọrọ teknụzụ na -akpụ akpụ ma na -agbacha agbacha nke nwere ike nweta njupụta ngwa ngwa iji hụ na porosity dị ala nke ebumnuche na ịchịkwa nha ọka.; (3) Usoro nkwadebe na -achịkwa ike iwebata ihe adịghị ọcha.
2. Usoro ịgbaze agbaze
Usoro ịgbaze agbazere bụ otu n'ime ụzọ dị mkpa maka ịme ebumnuche., a na -eme nzere na nkedo ya n'okpuru ikuku ma ọ bụ ọnọdụ nchekwa, n'oge usoro nkedo, ọ bụ ihe a na -apụghị izere ezere na enwere porosity n'ime ihe akụrụngwa. Pores ndị a ga -eme ka irighiri ihe ndị ahụ gbasaa n'oge usoro ịgbasa, si otua na -emetụta ịdị mma nke ihe onyonyo a na -efesa .. Maka nke a, a chọrọ usoro nhazi ọkụ na usoro ọgwụgwọ ọkụ iji belata porosity ya.
Prev: The ojiji nke lekwasịrị na agụụ electroplating
Next: Ebumnuche ejiri maka mkpuchi mkpuchi ngwaahịa elektrọnik
» Ihe mgbaru ọsọ na-agbasa Magnetron
» Kedu ọrụ igwe molybdenum lekwasịrị anya na -arụ n'ọhịa ekwentị mkpanaaka ihuenyo LCD?
» Mmepe nke elu-adị ọcha aluminum sputtering lekwasịrị ụlọ ọrụ
» Decrypt, ngwa nke lekwasịrị ihe na agụụ electroplating
» Uru nke cylindrical na planar magnetron sputtering zaa
» Ebumnuche ejiri maka mkpuchi mkpuchi ngwaahịa elektrọnik